19 badmaax oo ku dhintay kaddib markii ay gantaal isla heleen laba markab oo ay Iiraan leedahay (Muxuu markabku samaynayey?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka 19 badmaax oo ku dhintay kaddib markii ay gantaal isla heleen laba...
19 badmaax oo ku dhintay kaddib markii ay gantaal isla heleen laba markab oo ay Iiraan leedahay (Muxuu markabku samaynayey?)
(Tehraan) 11 Maajo 2020 – Ugu yaraan 19 badmaax oo Iiraani ah ayaa ku dhintay halka ay ugu yaraan 15 kale dhaawacmeen kaddib markii gantaal la dhacay markab kale oo ay leeyihiin isla Ciidanka Badda Iiraan, sida ay Ciidamadu xaqiijiyeen.
Shilkan oo uu ku lug leeyahay markabka taageerada saanadda badda ee Konarak ayaa dhacday xilli uu dhoollatus ka soconayey magaalo maarsada Jask oo ku jeedda Gacanka Cumaar fiidnimadii xalay.
Waxaa markiiba goobta gaarey kooxaha birmadka oo dhaawaca soo daabulay, iyadoo markabka burburay loo jiidey dhanka dekedda, isla markaana la bilaabay baaritaan.
War aan weli la xaqiijin ayaa sheegaya in markabka frigate-ka ah ee Jamaran, oo ay leeyihiin Ciidamada Ilaalada Jamhuurigu (IRGC), ay si kama’ ah gantaal markab-dile ah ula heleen markabka Konarak oo isagu xilligaa meel dhigayey bartilmaameed sabbaynaya oo loogu tala galay in kabdhood ahaan loogu toog barto.
Marinka luuqa ah ee Hormuus oo isku xira Gacanka Beershiya, Gacanka Cumaan iyo Badwaynta Hindiya, wuxuu ka mid ah marinnada ugu mashquulka badan dunida maanta, gaar ahaan shixnadaha saliidda ee uu gobolku hodonka ku yahay.
Waxaa marinkan mar kasta ku murma labada dal ee Iiraan iyo Maraykanka.
Previous articleWaalidiinta oo aan loo ogolaan doonin in ay carruurta gaari iskuullada ku geeyaan (Sabab?)
Next article”Waxaan qaatay diinta Islaamka!” – Silvia Romano oo markii ugu horreeysey hadashay (Hal arrin oo lala yaabban yahay!)